Superfoods izay tokony ampidirinao ao anaty sakafo | Bezzia
Toñy Torres | 14/09/2021 20:00 | Torohevitra momba ny fahasalamana
Raha resaka sakafo sy sakafo dia tsy azonao atao mihitsy ny milaza fa voasoratra daholo ny zava-drehetra. Satria, soa ihany, isan'andro ny fikarohana sy fikarohana vaovao mifandraika amin'ny sakafo sy ny fiantraikan'izany amintsika anatiny. Voaporofo fa misy fiantraikany amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa ny zava-maniry rehetra. Ary amin'ny fomba mitovy amin'ny sakafo sasany manimba ny fahasalamana, ny hafa dia manintona indrindra amin'izany.
Ny sakafo sasany dia misy akora sy otrikaina manampy amin'ny fanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana. Inona no tena ilaina mba ho voaro amin'ny viriosy, bakteria ary karazana aretina rehetra. Ireo sakafo ireo dia antsoina hoe "superfoods" ary ampidirina ao anaty sakafo tsy tapaka, afaka manampy anao ho salama, matanjaka ary voaro amin'ny atiny.
1 Inona avy ireo superfood
2 Ireo sakafo lehibe indrindra tokony ho ao anaty sakafonao
2.1 Voankazo Acai
2.2 Voa chia
2.3 Tea Matcha
Inona avy ireo superfood
Na dia lasa lamaody nandritra ny taona maro aza izy ireo, ny zava-pisakafoanana superfood dia tsy zava-baovao. Bebe kokoa, dia sakafo efa tafiditra ao amin'ny sakafontsika mediteraneana, toy ny menaka oliva. Na izany aza, ny ankamaroan'ny fantatra amin'ny anarana hoe superfood dia voa, voaroy ary sakafo exotic, izany no mampiavaka azy ireo sy hafahafa amin'ny ankamaroan'ny olombelona.
Ny teny hoe superfood dia tsy manana fototra ara-tsiansa samirery, saingy ekena izy satria ny famaritana azy dia mitombina amin'ny toetoetran'ny sakafo mahavelona an'ireo sakafo tafiditra ao anatin'io lisitra manokana io. Satria ny superfood dia sakafo misy lanja mahavelona be izay manome tombony lehibe amin'ny fahasalamana, toy ny antioxidants, vitamina, na tavy mahasalama.
Ireo sakafo lehibe indrindra tokony ho ao anaty sakafonao
Ny lisitry ny sakafon-tsakafo dia mihalehibe hatrany, satria vokatra avy amin'ny fambolena voajanahary izany ary betsaka ny orinasa miaro ny sakafo voajanahary sy mahasalama indrindra. Ankehitriny, tokony ho tsaroana fa ny sakafo irery dia tsy manana fahaizana manatsara ny fahasalamana. Ny sakafo mahasalama dia tsy maintsy voalanjalanja, isan-karazany sy antonony. Raha ampidirinao ao koa ireo superfood ireo dia hahazo tombony amin'ny fanananao rehetra ny vatanao.
Ity voankazo mitovy amin'ny manga ity dia iray amin'ireo mahasoa indrindra amin'ny fahasalamana noho ny fiharoam-be ao aminy. Ary, ny voankazo açaí dia manan-karena asidra matavy omega 3, 6 ary 9, asidra amine tena ilaina tena ilaina amin'ny fahasalamana. Anisan'ireo fananana ara-pahasalamana marobe, ny voankazo açaí dia tsara amin'ny fanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana, manohitra ny aretina toy ny homamiadana ary, hoy izy ireo, ho an'ny fahasalamana ara-nofo.
Angamba iray amin'ireo sakafon-tsakafo malaza indrindra satria efa an-taonany maro ny voa chia no hita ao an-dakozia an'izay mitady hanatsara ny fahasalamana. Izy io dia voa feno fananana tena mahasoa, eo amin'izy ireo, manankarena asidra matavy tena ilaina, kalsioma, manezioma ary votoatin'ny fibre avo io. Ireto voa ireto dia tsara ho an'ny fitetezana tsinay, fo, diabeta na kolesterola, ankoatra ny hafa.
Ity superfood ity dia azo raisina ho ilaina, satria noho ny fananany maro dia iray amin'ny mahasoa indrindra amin'ny fahasalamana izy io. Ny dite Matcha dia tsy inona fa ny karazana dite maitso afangaro amin'ny rano, izany hoe ny ravina iray manontolo dia lanina fa tsy ny fampidirana fotsiny, izay manampy fananana. Antioxidant mahery izay manakana ny fahanteran'ny sela, anisan'ireo tombontsoa ara-pahasalamana maro hafa.
Ity zava-manitra ity izay avy amin'ny fakan'ny fianakaviana sakamalao, dia heverina ho fanoherana ny inflammatoire voajanahary. Tsara ho an'ny fo, fanoherana ny inflammatoire, antioxidant ary tsara amin'ny fisorohana sy fitsaboana karazana homamiadana sasany.
Ireto ny sasany amin'ireo superfood manan-danja indrindra fantatra, na dia tsy izy ireo ihany. Na dia tena zava-dehibe aza ireo sakafo ireo dia tafiditra ao anaty sakafo amin'ny fomba voalanjalanja. Hatramin'io no ahafahana manatanteraka ny fananana rehetra sy ny tombony ara-pahasalamana. Satria tena zava-dehibe ny mahatadidy izany ny andrin'ny fiainana salama dia ny sakafo, ny fanatanjahan-tena ary ny fahazarana mahasalama.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Torohevitra momba ny fahasalamana » Superfoods izay tokony ampidirinao ao anaty sakafo